सरकारविरुद्ध सडक तताउने कांग्रेस नेता महतको चेतावनी « Kakharaa
सरकारविरुद्ध सडक तताउने कांग्रेस नेता महतको चेतावनी
१४ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाश शरण महतले ओली सरकारले सत्तामा बस्ने नैतिक आधार गुमाइसकेको बताएका छन् ।
कोरोना महामारीका कारण जनतामा त्रास छाएका बेला सरकारले अभिभाकत्व प्रदान गर्न नसकेको भन्दै उनले सत्तामा बसिरहने नैतिक आधार ओली मन्त्रिमण्डलले गुमाइसकेको टिप्पणी गरे ।
उनले देशभरका क्वारेन्टिनको अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । हाँच्छियु गरेर कोरोना निको हुने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नै यो सरकार जनताको पीडाप्रति उत्तरदायी नरहेको डा. महतले बताए ।
उनले यस्तो रबैया कायमै रहे कांग्रेसले सडक आन्दोलन मार्फत सरकारलाई ठेगान लगाउने चेतावनी दिए । अहिले कोरोना कहरका कारण सरकारविरुद्ध सडक प्रदर्शन गर्न नसकिएको बताउँदै उनले सरकार नसुध्रने हो भने कोरोना कहरकैबीचमा सडक तताउन कांग्रेस बाध्य हुने चेतावनी दिए ।
‘कोरोना महामारीका बेला भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्था भएका कारण मात्रै हामी संयमित भएका छौँ । राष्ट्रिय जीवन नै संकटपूर्ण अवस्थामा पार्ने काम सरकारबाट भइरहे हामी सडकमा उत्रन बाध्य हुनेछौँ’, उनले भने ।
काठमाडौंको मेघा कलेजमा लिडरशिप डेभलपमेन्ट एलाइन्सद्वारा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा सहभागी नेता महतले संवाददाताहरुसँग कुरा गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
२४ असार, काठमाडौं । आफूलाई सांसद र पार्टीबाट निष्काशन गर्ने निर्णय अवैधानिक भएको सांसद सरिता
खानपान नमिल्दा वा फाइबरयुक्त खानेकुराको कमीले बच्चामा कब्जियतको समस्या देखापर्छ । अक्सर बच्चाहरु नियमित शौच
२४ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले गठन गरेको उपसमितिले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा वाणिज्य बैंकका
२४ असार, काठमाडौं । सरकारले कोभिड–१९ न्यूनीकरणका लागि गरेको लकडाउनको समयमा इन्टरनेट खपत बढेको छ